Fambolena – fiompiana – jono: manana ny anjara toerana lehibe ny asa isam-pianakaviana | NewsMada
Nosokafana any Mahajanga, ny 13 jona teo, ny faha-10 taon4ny Famokarana eo amin’ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ataon’ny isam-pianakaviana. 13 tapitrisa ny tantsaha manerana ny Nosy ka manana anjara toerana lehibe amin’ny toekarem-pirenena ny asa isam-pianakaviana. 75 %-n’ny sakafo amidy eny an-tsena, miantoka izany ny mpamokatra tantanim-pianakaviana; manampy izany ireo vokatra ahodina, mbola avy amin’ny fianakaviana ny betsaka.
Koa manana anjara toerana lehibe eo amin’ny toekarem-pirenena ny asa ataon’ny fianakaviana tantsaha, saingy mitaky ezaka betsaka. Navoitra manokana ny famatsiam-bola, ny fampiofanana, ny fitadiavana sy ny fanohanana amin’ny lalambarotra. Fa olana nasongadina mahazo ireo tantsaha ireo ny fahazoana tany. Miankina amin’ireo teboka navoitra ireo ny fampandrosoana ny fambolena, ny fiompiana, ary ny jono.
Maro anisa indrindra ny mivelona amin’ireo lalam-pihariana nefa misedra olana samihafa. Nambara tany Mahajanga fa raha mamokatra vary 200 kg fotsiny ny isam-pianakaviana tantsaha, ampy ny tolotra ho an’ny eto an-toerana. Miankina amin’ny politika ankapobeny faritan’ny fitondram-panjakana anefa izany, toy ny fanamboarana fotodrafitrasa, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana, ny famatsiana angovo … Midika izany fa minisitera maro mifampiankina fa tsy anjaran’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana sy ny jono irery. Mbola hisy any amin’ny faritra hafa ny fankalazana, hanaovana tomban’ezaka sy hamaritana rafitra vaovao.